03 / 06 / 2021 04 / 06 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 314 Views စာ0မှတ်ချက် 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, LEGO Group, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, LEGO.com, MandRproductions, စျေးဝယ်, အဆိုပါ LEGO Group, YouTube ကို, YouTube ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အသစ်ဖြန့်ချိခြင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ပါ Lego 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger.
ဒီအစုမှာအကြီးစားသင်္ဘောသဖန်းသီးလို့ခေါ်ကြတဲ့အရံတည်ဆောက်ထားတဲ့ဟယ်ရီနဲ့ဟာမီနီယန်ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုပါရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်တီးဝိုင်းများနှင့်အတူလာကြပြီးသူတို့၏မှတ်မိလောက်သော Hogw တွင် ၀ တ်ဆင်ထားသည်artရုပ်ရှင်ကနေယူနီဖောင်း။
YouTuber တ MandRproductions သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဒီပုံနှစ်ခုကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သူသည်တည်ဆောက်မှုကိုအလွန်ကျေနပ်အားရပြီး၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
YouTuber က“ သူတို့မျှော်လင့်ထားနိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်တည်ဆောက်ထားတယ်။ “ သူတို့ကထိပ်ကိုကျော်မသွားဘူး။ လုံးသေနတ်သမားတွေလား၊ နွေရာသီမှာသေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့သေနတ်သမားလိုမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုထုပ်ပိုးမယ်။ သူတို့က barebone တွေပါ၊
တည်ဆောက်နိုင်သောစာလုံးများတွင်ရွေ့လျားနိုင်သောလက်များနှင့်ခြေထောက်များလည်းရှိသည်၊ အပိုင်း ၁,၆၇၃ ခုမှာသူတို့သည်ကြီးမားတဲ့တည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝတည်ဆောက်သည့်အခါ ၂၆ စင်တီမီတာမြင့်သည်။
76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger တရားဝင်စတိုးဆိုင်များနှင့်ထံမှအခုအချိန်မှာရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com£ 119.99 မှာလက်လီ။ သင်သည်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်အပေါငျးတို့သရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီလထွက်လာသောအစုံ ဒီမှာ.
← Prime Day LEGO အထူးလျှော့စျေးများကိုအထူးဂရုပြုပါ
Lego Star Wars 75296: Darth Vader တရားထိုင်ခြင်းအဖွဲ့သည်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့သည် →